Ukubhukwa kwamahhotela oku-inthanethi ngentengo engcono, ungakhokhi ngaphezulu ngamaholide akho
Sebenzisa injini yokusesha ukwenza bhuka ihhotela lakho
Ngabe ucabanga ukuthatha uhambo futhi ungazi ukuthi uzoqala ngaphi? Njengoba izindaba ezinhle zisho, sizokwenza kwasekuqaleni. Enye yezinkinga zokuqala esinazo bhuka amahhotela. Ngaphandle kokungabaza, sifuna njalo thola amahhotela ashibhile ezinezimo ezinhle ukuze ukuhlala kwethu kungalibaleki. Namuhla sikusiza ngakho!
Chofoza lapha ukubhuka ngamanani aphambili ku-Intanethi
Ungawathola kanjani amahhotela ashibhile kwi-inthanethi
Uma kukhulunywa ngokufuna ihhotela elihle eholidini lethu elilandelayo, ngeke kusadingeka sichithe amahora sibheka ohlangothini olulodwa noma kolunye. Manje usungagxila kuyo yonke imizamo yakho kweminye imisebenzi emnandi kakhulu.
Uma ungenalo ihhotela elithile engqondweni, zivumele uqondiswe yithi othole ihhotela. Kulokhu, kuzoba indlela esheshayo futhi elula kunazo zonke okufanele uthole lonke ulwazi ngokuchofoza okukodwa nje.
Enye inketho yokuthola amahhotela aphezulu Kuku-ejensi nge-inthanethi. Vele, futhi, kufanele ucabange ukuthi noma nini lapho kukhona abalamuli balolu hlobo, amanani azokhuphuka.
Ungakwazi iya ekhasini lehhotela Vele, kwesinye isikhathi, abahlali ukukunikeza izinzuzo noma amanani esingawabona sonke.
Izinyathelo eziyisisekelo zokuthola amahhotela ashibhile online
Amaqembu: Ngaphambi kwe yenza ukubhukaKuhle njalo ukutadisha kancane indawo esiya kuyo eholidini. Funa imininingwane uma kungenzeka kube nohlobo lomcimbi kuleyo ndawo ekhethiwe. Lokhu kungenxa yokuthi uma kunjalo, amanani abiza kakhulu.
Amadolobha aseduze: Uma ekugcineni ukuthola lokho, kulawo izinsuku zokuphumula kwakho, indawo oya kuyo isephathini ngoba kufanele ufune enye indlela. Umqondo omuhle ukukhetha amadolobha azungezile. Ngale ndlela, sizobe siseduze bese sisebenzisa imali encane ehhotela.
Phambili: Ngaphandle kokungabaza, lapho sesivele sazi futhi sicacile mayelana nokuthi sizohambaphi, ngakho-ke kungcono ukubhuka maduzane. Intuthuko ingasisindisa ekuphumeni egumbini lamaphupho. Bheka i- amadili amahhotela afaka konke noma ngebhulakufesi nje. Ngenxa yalokhu, manje sesingakhetha ngokuya ngezidingo zethu.
Amahostela noma izimpesheni: Sesivele sazi ukuthi sonke singakwazi ukuphupha ihhotela elikhulu, kepha impela kwabaningi bethu, kuzophuma kubhajethi. Ngakho-ke, yisikhathi sokubeka izinyawo zakho phansi futhi ubheke ezinye izindlela. Uma uzochitha usuku lonke usuka kwenye indawo uye kwenye, kungcono ukukhetha okunikezwa yihhotela. Okuhamba phambili kuzoba emahostela abizwa ngokuthi yizimpesheni noma ezimpeshenini. Izindawo ezinhle zokugeza nokuphumula amahora anele.
Izingane mahhala: Uma uhamba nezingane, akulimazi ukubheka lezo zinketho esivumela ukwehliswa kwentengo. Kuya ngeminyaka, kuningi amahhotela aphansi Ngeke bakukhokhise ukuthi omncane alale egumbini elilodwa. Kumele ubheke kakhulu inqubomgomo yabo yezimo.
Ungayibhuka kanjani ihhotela online?
Namuhla sinenhlanhla yokuba ne-intanethi. Ngaphandle kokungabaza, elinye lamathuluzi amahle kakhulu okwenza impilo ibe lula. Lapho sisendleleni, sibona futhi isibhakabhaka esivulekile kuso. Ufuna bhuka ihhotela online? Yebo, ilula kunazo zonke.
Uma usuvele ubhekile futhi usuvele unehhotela olidingayo eholidini lakho, isinyathelo esilandelayo ukwenza ukubhuka. Ukuze singashintshi kaningi ngokungacabangi, sikhethe injini yokusesha yamahhotela (chofoza lapha ukufinyelela nokubhuka ngentengo engcono kakhulu). Uzosenzela wonke umsebenzi. Sidinga nje ukungena lapho kuphela khona. Uma uyikhethile, uzobe uza neziningi izinketho zehhotela. Phakathi kwazo, ungabona zonke izimfanelo zayo. Ukusuka endaweni kuya ezithombeni ezibukhali ukuthola umbono. Lapho usuthathe isinqumo, kuzofanele ukhethe esikuqinisekisa kakhulu. Ngokuchofoza le nketho, uzothola ikhasi elisha ozokwazi ukukwenza khetha igumbi. Lapho ungabheka zonke lezo ezimahhala nezinsuku ezitholakalayo. Lonke lolu lwazi, ungalukhetha ngendlela elula kakhulu nakusofa wakho. Lapho umboze yonke into, kufanele uchofoze ukwamukela bese ukubhuka kuzosebenza.
Ukubuyekezwa kwamahhotela online
Enye yamandla lapho wenza ukubhuka kwehhotela ukufunda kancane imibono okushiywa ngamakhasimende. Vele, akuhlali kunembile kakhulu futhi, esimweni sokuthandwayo, akekho ophethe. Noma kunjalo, ungathola umbono wezinto ezivame kakhulu endaweni oyikhethile. Njengomthetho ojwayelekile, izinto ezinjengokuhlanzeka nomsindo kuvame ukuxoxwa ngazo. Okubili amaphuzu abalulekile uma kukhulunywa ngokukhetha indawo eyodwa noma enye.
Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukuthi babe ne- Ukwamukelwa kwamahora angama-24. Ngaphezu kwanoma yini ngoba asazi ukuthi sizofika nini futhi uma sesikule ndawo, ngokuqinisekile sizoba nesikhathi esithe xaxa ngaphandle kunangaphakathi. Ngendlela efanayo, kufanele uthole ngezikhungo nokusetshenziswa okuhle okwenziwe ngazo. Lokhu futhi sizokuthola njengokuhlola ku amakhasi okuphawula. Kwesinye isikhathi kungcono ukuthi uchithe isikhashana ufunda, njengoba uzobona ukuthi imininingwane iqala ukuvela kanjani. Kuyindlela ekahle yokuthola umbono wendawo, ngaphambi kokuba ube lapho.